ए सरकार ! सम्पत्ति भौतिक मात्र हुन्छ कि बौद्धिक पनि ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ए सरकार ! सम्पत्ति भौतिक मात्र हुन्छ कि बौद्धिक पनि ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित १८ जना मन्त्रीहरुको भौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छ । धन्यवाद ! यो विगतको परम्परा पनि हो । विरासत धान्ने कुरा पनि होला । जनताको केही चासो पनि भयो नै ।
सम्पत्ति विवरण ‘नलुकाई’ सार्वजनिक भएको रहेछ । सबैको घर रहेछ । जमिन रहेछ । धेरै जसो नेताहरुको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि आर्थिक रुपमा निम्न पुँजीपति वर्गका भएकाले सो हुनु अस्वाभाविक होइन पनि ।
पुँजीको विकास गर्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका सरकारी मानिसहरुको यो सम्पत्ति कम नै हो । कतिपयको सुनचाँदी मोह पनि देखिन्छ । भन्ने गरिएको समाजवाद निर्माणको विचार र जीवन व्यवहारमा आकाश पातालको भिन्नता पनि देखिन्छ ।
मन्त्रीहरुले आफ्नो भनी सार्वजनिक गरेको तर अधिकांश सम्पत्तिमा मन्त्राणीहरुको दुईतिहाई सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ । सुन र चाँदी मोह पनि निकै देखिएको छ । कार्ल माक्र्सले खिया नलाग्ने भएकाले सुन ट्वाइलेटमा प्रयोग गरिने छ भनिदिए पनि कम्युनिस्ट मन्त्री र मन्त्राणीहरुले सुन एक बहुमूल्य धातुका रुपमा शरीरभरि प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ ।
मन्त्री तथा मन्त्राणीहरुको उत्पादन तथा आय आर्जनको स्रोत सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धमा आधरित भएको उनीहरुले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणले आफै देखाउँछन् । तर आश्चर्यको कुरा उनीहरु समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
अर्को आश्चर्यको कुरा, सम्पत्ति भनेको भौतिक मात्र होइन र हुँदैन पनि । आजकल त वौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि आएको छ । वौद्धिक सम्पत्ति भनेको सोचविचार र सुवुद्धि हो । त्यो बारेमा चर्चा नै भएन, सम्पत्ति विवरणमा । मन्त्रीहरुले भन्ने गरेको समाजवाद निर्माणमा उनीहरुको विचार, वौद्धिकता र प्रतिवद्धता कति छ ? जनताले त्यो हेर्न र जान्न चाहन्छन् । शायद वौद्धिक सम्पत्ति हुनेहरुले सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार, तस्करी, राज्यको सम्पत्ति दोहन र नदीनाला लगायत देशका सम्पत्ति बेचबिखन गर्दैनन् होला ।
मन्त्रीज्यू ! यो वौद्धिक सम्पत्ति तपाईंहरुसँग छ होला ? अबका सचेत जनताले यो कुरा सार्वजनिक भएको हेर्न चाहन्छन्, तपार्इंका कार्यकालका ५ वर्षसम्म पर्खेर भए पनि ।
कि तपाईहरुले सार्वजनिक गरे झैं वौद्धिक सम्पत्ति पनि थोरै छ । भएको वौद्धिक सम्पत्ति पनि आफ्ना जीवनसंगिनीहरुको स्वामित्व अन्तर्गत छ ? होइन भने त शङ्कै छ है, कुन वुद्धि र बुताले नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाइदिने हो ?